Warka Arooryo iyo Maxamed Lakiman, Daljir Gaalkacyo (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 5, 2018 2:13 b 0
Arooryo suubban! Ku soodhawaada warkii subaxnimo. Waxaa aroortaan idiin akhrinaya Maxamed Lakiman oo ku sugan xarunta Daljir Garoowe.
Hoos ka dhegayso oo nala qaybso fiiro iyo falcelis.
Waxgaradka Gobalka Sanaag oo ka hadlay dhismaha waddada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo (dhegayso)
Wariye Madaxbannaan oo Daljir uga warramay dagaalka deegaanka Caad ee Xarardheere (dhegayso)
on Kenya oo xayiraad saartay duullimaayada KismaayoWaa rain layaableh tan dhacday manta